लघुकथा: नमस्ते सम्मान - Naya Online
लघुकथा: नमस्ते सम्मान
शनिबार, भदौ ५, २०७८ (August 21st, 2021 at 1:58am ) साहित्य
रिटायर्ड लाइफ, दिनमा एक पटक हिड्छु । बिहानै मास्क लगाएर हिँडीरहेको बेला एउटी केटीले नमस्ते गरिन् । फर्काउनै आटेको थिएँ, मेरो पछाडिबाट फटाफट हिँडेको आवाजसँगै नमस्ते भन्ने आवाज आयो । नमस्ते त तिनलाई पो गरेको रहेछ ।
को रहेछ ? भनेर हेर्दा चिनेकै साली पो रहेछ । नमस्ते गर्छिन् कि भनेर हेरेँ । नबोली मलाई नहेरी फटाफट मलाई उछिनेर हिँडिन् । तिनलाई अलिक अगाडि अर्कै केटीले नमस्ते गरिन् । फेरि अर्काले, मैले देख्दाखेख्दै साली नानीले चारवटा नमस्ते थापिन् । मास्कले गर्दा मलाई चिनिनन् होली कि मुला बुढो भेनाजुुको वास्तै नगरेको ! अलमलमा मनमनै कुरा खेलाउँदा आफ्नो तन्नेरी कालको सम्झनामा पुग्छु ।
बि.ए. परीक्षा दिएपछि गाउँकै प्रा.वि.मा प्रधानाध्यापक भएको थिएँ । नमस्तेबारे विद्यार्थी केटाकेटीहरूलाई थाहै थिएन । छडिले पिटीपिटी नमस्ते गर्न सिकाईयो । हेडसर भएपछि खुब नमस्ते खाइयो । पछि क्याम्पसमा पढाउदा पनि १०, १२ वर्ष नमस्ते पाइयो । त्यसपछि भने १०, १२ वर्ष नमस्ते गुडमर्निङ छ्यासमिस !
त्यसपछि त विद्यार्थी देखेपछि तर्सिन थालियो । दाँत झारेभने… नक्कली नयाँ दाँत राख्न नसकिने तलब । डरैले छोडियो प्राध्यापन । रिटायर्ड मुलालाई कसले गर्छ नमस्कार ।
त्यसो भए पनि नमस्ते पाउने भोक मेटिएको छैन । कसैले नमस्ते गरिहाल्छ कि चनाखो भएर हिँडिहेको हुन्छु । नमस्ते पाईएन । दूध लिएर फर्किन भर्खर खोलिएको नयाँ पसलमा दूध किन्न पस्छु । भर्खरकी पसल्नीले नमस्ते गर्छिन् । गदगद हुँदै नमस्ते थाप्छु । यसभन्दा अगाडि त कहिल्यै नमस्ते गर्दिनथिन् । आज कसरी गरिन् ?
जेसुकै होस् म त्यो नमस्तेले सम्मानित भएको अहसास गर्न पुग्छु । थोरै भए पनि आनन्दित हुन्छु । धन्य नमस्ते सम्मान ! सबैले पाउन्, सबैले सम्मानित जीवन भोग्न पाउन्….. म सोच्न थाल्छु ! नमस्ते सम्मान ! मानिसहरूलाई बिना लागत खर्च नगरी दिन सकिेने प्रसन्नता, सुख र सम्मान मामुलीजस्तो लाग्ने नमस्ते रहेछ ।